Owayesakuba yindawo yokubhaka encinci kweli lizwe - I-Airbnb
Owayesakuba yindawo yokubhaka encinci kweli lizwe
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguFritz
Apho isonka besibhakwa khona kwifama yethu yangaphambili, iindwendwe zethu ngoku zinokuchitha iintsuku zokuphumla kumakhaya eeholide anefenitshala etofotofo kwaye exhotyiswe kakuhle ngawo onke amaxesha onyaka.
Indlu yeendwendwe inamanqanaba amathathu: kumgangatho ophantsi igumbi lokuhlambela elineshawa, isinki kunye nendlu yangasese kunye nekhitshi elinesitovu, imicrowave, itoaster, iketile, njl.njl. Kwinqanaba lesibini yindawo yokuhlala enebhedi esongwayo esongwayo (140). x 200), TV, stereo, lokuvasa ngubo kunye eziko. Phezulu kwendawo ephakamileyo evulekileyo (ifikeleleka nge-stepladder) kukho iibhedi ezimbini ezingatshatanga ezinokutyhalwa kunye, ukulinganisa i-140 x 200 cm iyonke - indawo efanelekileyo kunye nenomdla wokulala, kungekhona nje kubantwana!
Kwiindawo ezimbini ezincinci kwicala elingasempuma nasentshona, iitafile, iibhentshi kunye nezitulo ziyakumema ukuba utye kwindawo evulekileyo.
Ewe, iindwendwe ezinezilwanyana zasekhaya nazo zimenywe ngobubele kwaye zamkelekile.
IHallstedt yilali encinci, ezolileyo enabemi abamalunga ne-180 kwaye ikwindlela encinci ejikelezayo esetyenziswa kancinci enendlela yomjikelo kumda we "Wildeshauser Geest Nature Park". "I-Hallstedter Beeke" idlula kwilali ukuya kwinkampu enechibi lokuqubha kwaye iqukuqela ukuya eHache kwindawo yogcino lwendalo echongiweyo e-Neubruchhausen, iikhilomitha ezi-2 kude.
Apho uya kufumana indawo yokubhaka, ivenkile encinci yelali kunye neendawo zokutyela ezimbini.
Ukuze uphonononge iindawo ezikungqongileyo ezintle, ukuhamba ngebhayisekile okanye ngeenyawo kulungile- iindlela eziphuhliswe kakuhle kunye nezalathiso zizisa ngokukhuselekileyo kwindawo oya kuyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Fritz
Mna nomfazi wam sihlala kwisakhiwo esikhulu kwaye sinokuqhagamshelwa nanini na.